हाम्रो २०१२ सुपर बाउल, संस्करण २! | Martech Zone
सोमबार, फेब्रुअरी 25, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
प्रगति जारी छ! प्याट Coyle र म मा ठूलो प्रतिभा (टिम र कर्टिस) मा काम गर्दै छौं नवीन इन्डियानापोलिसमा २०१२ सुपर बाउलको लागि बोलपत्रको लागि समर्पित वेबसाइट बढाउँदै।
सुपर बाउल कमिटीको अध्यक्ष मार्क माइल्स नेतृत्व गर्दैछन् केन्द्रीय इंडियाना कर्पोरेट पार्टनरशिप। मार्कले पहिले नै एक असाधारण काम गरिरहेको छ, सजिलैसँग वेब टेक्नोलोजीहरू अपनाउँदै समुदायको समर्थनलाई सूचित गर्न र दर्साउन। वेबसाइटको यो 'संस्करण' ले लक्ष्य प्रतिबिम्बित गर्दछ - हामीसँग अब निम्न सुविधाहरू छन्:
भिडियोहरू दुबै खेलाडीमा प्रदर्शन हुन्छन् र प्रयोगको लागि रूपान्तरण हुँदैछ Youtube ताकि हामी भाइरल हुन सकौं! तपाइँको गर्वको प्रदर्शन गर्न र निश्चित गर्नुहोस् तपाइँको ब्लगमा भिडियो प्रदर्शन गर्नुहोस्!
मार्क पारदर्शी ढ leading्गले चार्जको नेतृत्व गर्न समर्पित छ - त्यसैले हामीले टोलीले के गरिरहेको छ र उनीहरूले कसरी मद्दत गर्न सक्दछन् भन्ने बारे समुदायलाई अद्यावधिक जानकारी प्रदान गर्न ब्लगि adop अपनाउने समिति पायौं। कम्पेन्डियम सफ्टवेयरले यो कदम समर्थन गर्न को लागी कदम चालेको छ र खाता को कला को आफ्नो राज्य को लाभ उठाउन प्रदान गरीन्छ कर्पोरेट ब्लगि application अनुप्रयोग!
कुराकानीहरू वेबको चारै तिरबाट खोजी भइरहेको छ र गृह पृष्ठमा प्रदर्शन गरिएको छ ताकि तपाईं सामेल हुन सक्नुहुनेछ! यो आवश्यक छ कि हामीले समुदायलाई कुराकानीमा सामेल हुनको लागि एक साधन प्रदान गर्‍यौं, यो सकारात्मक हो वा होइन। कमेटी केवल सुपर बाउल प्राप्त गर्न समर्पित छैन, तर उनीहरू यसलाई समुदायलाई सबैभन्दा उत्तम सुपर बाउल कसरी बनाउने भन्ने बारे समुदायहरू चाहान्छन्।
याहू प्रयोग गर्दै! पाइपहरू, मैले एउटा जटिल योजना बनाएँ जुन २०१२ को सुपरबोयलको बारेमा लेख्दा हाम्रो स्थानीय समाचार र मिडिया साझेदारहरूबाट नवीनतम लेखहरू आउटपुट गर्दछ र फिल्टर गर्दछ। यो यस्तो छ कि हामी मिनेट समाचारहरू पनि प्रदान गर्न सक्दछौं र स्थानीय मिडिया समर्थन पनि बिडको लागि देखाउन सक्छौं।
ExactTarget समितिको मद्दतमा पनि आएको छ र एक खाता प्रदान गरेको छ जहाँ हामी समाचार चेतावनीहरू र न्यूजलेटर्स बाहिर धकेलिरहेका छौं! हामी अर्को एक्सेक्टरेटको एपीआई प्रयोग गरेर ईमेलमा फिडहरू र ब्लगलाई एकीकृत गर्न काम गरिरहेका छौं
यी सबै 8PM पछि र सप्ताहन्तमा! मान्छेलाई टायर गर्नको लागि यो पर्याप्त छ - तर यो पास हुनको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर हो!
टैग: २०२० सुपर बाउलकल्ट्सइंडियानापोलिसइन्डियानापोलिस कल्टहरूindianapolis सिताराप्याट कोयलसुपर कटोरा
फेब्रुअरी १,, २०११ 26:१:2008 अपराह्न
पहिले नै राम्रो हेर्दै। रातारात यो एक 'आधारभूत जानकारी' साइटबाट 'जीवित, सास फेर्न, भर्खरको जानकारीको लागि ठाउँ' साइटमा गयो। ठूलो काम डूड।